लाइसेन्सको फारम भर्दै हुनुहुन्छ? सरकारले ल्यायो यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
अब सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि एउटा मोबाइल नम्बर र नागरिकता नम्बरबाट एउटा मात्रै आवेदन फारम भर्न सकिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले फरक फरक मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर धेरै फारम भरेको पाइएपछि यस्तो नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
विभागको सूचनाः यस विभागले हालै संचालनमा ल्याएको सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाईन आवेदन प्रणालीमा एउटै आवेदनकर्ताले फरक फरक मोवाईल नं. प्रयोग गरी एकभन्दा बढि प्रोफाईल बनाई आवेदन फाराम भरेको देखिन आएकोले एउटा मोबाईल नं. र नागरिकता नं.बाट एकपटक एउटा मात्र अनलाईन प्रोफाईल बनाउन सकिने गरी व्यवस्थापन गरिएको हुँदा अनलाईन प्रोफाईल बनाउने क्रममा नाम, ठेगाना, नागरिकताको विवरण, सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण लगायतका विवरण भर्दा त्रुटि भएमा आफूले आवेदन गरेको / गर्न चाहेको नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई त्रुटिपूर्ण विवरण हटाउन लगाई पुनः आफ्नो विवरण भर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । प्रत्येक दिन बिहान ७ बजे १६ औं दिनको लागि आवेदन खुल्ला हुने भएक्रोले समय व्यवस्थापन सोही बमोजिम गर्नुहुन समेत अनुरोध छ ।